Niverina ny « TSENA MORA », fepetra isany noraisin’ny fanjakana hanampiana ny mponina amin’ny fitadiavana ireo filàna fitotra toy ny vary sy menaka. Ho an’ny teto Antananarivo renivohitra dia nampiasaina ho « TSENA MORA » ny sekolim-panjakana sasany. Nidina ifotony nanara-maso izany ireo tomponandraikitra teo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika sy arak’asa izay notarihin’ny Minisitra Andriamanana Josoa Rijasoa Iarintsambatra androany maraina, nijery ny fanarahana ireo fepetra rehetra tokony hajaina mba hisorohana ny fihanaky ny valan’aretina coronavirus na Covid-19.
samedi, 21 mars 2020 14:05
Andro manerantany ho an’ny rano: Nahemotra ho amin’ny andro hafa ny fankalazana
Ankalazaina isan-taona isaky ny 22 marsa ny Andro manerantany ho an’ny rano, manoloana ny fisian’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara sy ho fanajana ny fepetra mandrara ny fitangoronana sy ny havoriana ato anatin’ny 15 andro, hisorohana ny fiparitahan’ity valanaretina ity dia nanapa-kevitra ny ministeran’ny rano fa ahemotra ho amin’ny fotoana manaraka ny fankalazana nasionaly tokony hatao ao Betambatra, Distrikan’i Manjakandriana, Faritra Analamanga ny 22 martsa 2020 araka ny lohahevitra « Rano tsara tantana, fanoitra amin’ny fivoaran’ny toetrandro ».
samedi, 21 mars 2020 13:28
Fianarantsoa: Aorian’ny 15 andro vao hisy indray ny fisoratam-panambadiana ankoatry ny androany
Miomana hiatrika ny fiparitahan’ny coronavirus ny eto amin’ny Faritra Mahatsiatra Ambony, nohamafisina ny paik’ady hiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Ho an’ny Kaominina ambonivohitr’i Fianarantsoa dia aorian’ny 15 andro vao hisy indray ny fisoratam-panambadiana ankoatry ny androany. Foanana ihany koa ny tsena Zoma sy Talata mandritra ny 15 andro.
samedi, 21 mars 2020 13:12
Coronavirus: Nidina ifotony nandrara ireo hetsika famoriam-bahoaka ny Polisim-pirenena
Nidina teny Ankadindratombo, Kaominina Alasora, Distrika Antananarivo Avaradrano ny Polisim-pirenena, androany maraina, nandrara ireo hetsika mahavory vahoaka toy ny tao amin'ny Fiangonana iray. Izany dia ho fanatanterahana ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana amin'ny tsy tokony hisian'ny hetsika famoriam-bahoaka manoloana ny fisian’ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Hidina eny amin'ireo tsena maro samihafa sy ireo toeram-pivarotana isan-karazany ihany koa ny Polisim-pirenena hisoroka ny mety ho fanararaotana amin’ny endriny samihafa. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 21 mars 2020 12:28
Andro iraisam-pirenena ho an’ny Ala: Nofoanana ny fankalazana saika hatao eny amin’ny Valan-javaboahary Tsimba
Ho fampiharana avy hatrany ny fanambaran'ny Filohan'ny Repoblika, Andry Rajoelina ny amin'ny fanafoanana ny famoriam-bahoaka sy hetsika rehetra mandritra ny 15 andro noho ny coronavirus dia nanapa-kevitra ny ministeran’ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy fa foana ny fankalazana nasionaly ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny Ala izay saika hatao eny amin’ny Valan-javaboahary Tsimbazaza-Antananarivo.
Nivory ny SECES (Sendikan’ny Mpampianatra-Mpikaroka sy Mpikaroka-Mpampianatra) Sampana Antananarivo, androany 20 Martsa 2020, manoloana ny zava-misy ankehitriny, ary miantso ny rehetra mba « hiray hina tanteraka, hifanome tànana », ny SECES manoloana ny fiparitahan’ny areti-mandoza « Coronavirus » ary « tsy hiroaroa saina manoloana ireo toromarika avy amin’ny fitondrana, tsy hamafy lainga ary samy handray ny andraikitra manandrify azy avy ». Mila mikaon-doha haingana ny manam-pahaizana Malagasy sy ireo mpitsabo nentim-paharazana mba hanomana ny lisitra mirakitra ireo karazam-panafody misy eto an-toerana ka mety ho zakan’ny fahefa-mividin’ny valalabemandry, heverina fa mety mahasitrana an’io aretin-dratsy io. « Ny tsara fiomanana hono tsy ho tampohin’ny loza » ary « Ny sery vitan’anamalaho tsy hamonoana vantotr’akoho ».
Nisy fantsona lehibe roa lasan’ny rano ary nisy ihany koa ireo fantsona nilatsahan’ny vato ka mitaky fanamboarana, hoy ny avy eo anivon’ny Jirama. Ny ora-nikija no nitarika ny fahasimbana, ka izany no fototr’ity fikorontanan’ny famatsian-drano eto an-drenivohitry ny Faritra DIANA ity, hoy hatrany ny fanazavana. Vahaolana vonjimaika ny fitaterana rano amin’ny "camions citerne", izay irahan’ny JIRAMA sy ny orinasa STAR miasa, hamatsiana ireo Fokontany samihafa. Ireo mponina akaikin’ny tobim-panadiovan-dranon’ny JIRAMA, PK7 kosa dia nomena alalana haka rano mivantana eo amin’io toby io. Hisy « citerne » fanampiny avy any Antsohihy hanampiana ny famatsiana rano sy eo ampiandrasana ireo fitaovana fanampiny avy any Antananarivo, ilaina amin’ny fanamboarana ireo fantsona simba. (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 17 mars 2020 20:42
Hetsika ara-tsosialy: Fizaham-pahasalamana maimaimpoana ho an'ireo bekotro maroholatra
Hahatsiaro ny faha 73 taonan’ny tolom-panafahana 29 martsa 1947 i Madagasikara amin’ity taona 2020 ity. Tafiditra indrindra ao anatin’izany ity hetsika ara-tsosialy ity, izay nanaovana fizahana maimaimpoana ny fahasalaman'ireo bekotro maroholatra notarihan'ny Fitalean'ny Mpiady Tia Tanindrazana eo anivon'ny Minisiteran'ny Fiarovam-pirenena, niarahana tamin'ny Fikambanan'ny Fifanampiana Malagasy teny amin'ny "Centre de Soins et de Santé" androany talata 17 martsa 2020. (Jereo Sary Tohiny)
Page 12 sur 220